शब्दकोश: June 2012
ओइ सयपत्री !
बास्ना जति खोइ कहाँ लुकाएर
पत्र-पत्रको पङ्खा हम्किँदै आउने
त्यो तिमी नै थियौ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, June 26, 2012 1 : Comments
कवि कृष्णभूषण र काठमाडौंलाई हाँक दिने कविता
[ २००४ चैत १ - २०६९ असार ११ ]
Photo © Jotare Dhaiba
असार ११ । कवि एवं प्राज्ञ कृष्णभूषण बलको ६५ वर्षको उमेरमा सोमबार साँझ निधन भएको छ । गत शुक्रबार मस्तिष्काघात भई विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको कवि बलको उपचारकै क्रममा सोमबार साँझ साढे सात बजे निधन भएको हो । २००४ साल चैत १ गते इलामको माल्टेनी रविमा जन्मिएका उहाँका 'दाज्यु तिम्रो हात चाहिन्छ' खण्डकाव्य, 'भोलि बास्ने बिहान' नामक कवितासंग्रह र अङ्ग्रेजीमा अनुदित कविताको सँगालो 'द फुल मुन एट द रिभर ब्याङ्क' प्रकाशित छन् । वाणी प्रकाशनका अध्यक्षसमेत रहेका कवि बलको 'काठमाण्डू एक्लैले काठमाण्डू बोक्न सक्दैन' भन्ने कविता निकै चर्चित छ । शुक्रबार मर्निङ वाकबाट घर फर्किएर नुहाउन लाग्दा बाथरुममा बेहोश भएपछि उहाँलाई न्यूरो अस्पताल लगेर सघन उपचार कक्षमा राखी उपचार गरिएको थियो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, June 25, 20120: Comments
केही वर्षयता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय कविता महोत्सव लगातार विवादमा पर्दै आएको छ । नेपाली साहित्यको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनको जिम्मा पाएको एकेडेमीको जन्मोत्सव जस्तो पुनीत अवसरमा वर्षेनी हुँदै आएको कार्यक्रम विवादमा मुछिइरहनु त्यसै पनि लाजमर्दो कुरा हो । त्यसमा पनि युवा कविहरुले आफूलाई फुलाउने र फलाउने क्रममा प्रतियोगितालाई सिंढी बनाउन खोज्दा यस्तो विवादले घेरिएको प्रतियोगिताका कारण खिन्नता र निराशा मात्रै हात पार्छन्, भलै प्रतियोगितामा सहभागी हुनु-नहुनु र पुरस्कृत हुनु-नहुनुले कविताको महान्‌ता सावित गर्दैन ।
एकेडेमीको अस्वस्थ चाला देख्‍दा कतिपय साहित्यप्रेमीको त नेपाली साहित्यको वर्तमान धाराप्रति नै मोहभंग हुँदो हो । कविता महोत्सवको पछिल्ला वर्षको झलक हेर्दा नेपाली साहित्यमा भनसुन र आफन्तवादको लालमोहर लगाउँदै आएको देखिन्छ एकेडेमीले । खै यसको गरिमा र मर्यादा ? देख्‍नेहरु त बरु एकेडेमीको कविता महोत्सव पञ्चायतकालमै ओजपूर्ण थियो भन्छन् । यस्तै बनावटी महोत्सवको आयोजना गर्ने हो भने आगामी वर्षदेखि एकेडेमीले कविता महोत्सवलाई 'गाईजात्रे महोत्सव' भनेर आयोजना गरे हुन्छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, June 24, 20129: Comments